उपचर्म निशान (पनि ग्रन्थि पैसाबारे रूपमा जानिन्छ) बिरालो नै खतरनाक छैन। प्रायजसो यो demodectic mange गराउँछ। यो परजीवी जनावर गरेको कोट मा हुन्छ, आफ्नो अन्डा त्यहाँ राख्नु। छोटो समयमा उहाँले बिरालो शरीर भर चाल धेरै कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। को निदान को शुद्धता प्रमाणित गर्न, ध्यान दिएर आफ्नो पाल्तु जनावर को कपाल निरीक्षण। को पाल्तु जनावर छाला nacre डाली हुनेछ भने आफ्नो शक, पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिरालोहरु मा उपचर्म पैसाबारे जनावर को बढ्दो दाह मा पहिचान गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। कुनै स्पष्ट कारण लागि आफ्नो मायालु बिरालो, क्रोधित पिन्चे, आक्रामक भए? उहाँले स्ट्रोक आफूलाई अनुमति र आफ्नो सम्पर्कमा तिरस्कार गर्दैन? सायद बिरालो एक निशान देखि पीडित छ।
बिरालोहरु मा उपचर्म पैसाबारे कारण विभिन्न कारक उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा साधारण रूपमा संक्रमित जनावर संग सम्पर्क भनिन्छ गर्न। आफ्नो चार-खुट्टे मित्र बाहिर जाने र फिर्ता आउन मुक्त छ? शायद तिमी गाउँ वा देश को गर्मी उसलाई लिन निर्णय गर्नुभएको? यस मामला मा, पैसाबारे लगभग असम्भव छ जोगिन। रोग मानिसलाई पशु देखि प्रसारित गर्न सकिन्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। तपाईं घर बाहिर एक बेघर बिल्ली को बच्चा टिप्न निर्णय भने, यो demodectic mange देखि वस्तुतः unsanitary अवस्था बढ्दै, सबै जनावरहरू असर पशुचिकित्सा देखाउन आवश्यक छ। उपचर्म टिकटिक बिरालो पनि यसको कम प्रतिरक्षा देखाउँछ।
जसको लक्षण तुरुन्तै उत्पन्न गर्न सक्छ बिरालोहरु मा उपचर्म कण, प्रगति हुन सक्छ। के संकेत तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ? पहिलो एक सहन नसकिने खुजली छ। एक पुरा धेरै स्नायु व्यवहार रूपमा आफ्नो पाल्तु जनावर, सबै समय itches। को विशेषता चमक बाहेक पशु को छाला, रातो nodules र pimples को लेपित हुन सक्छ। रोग progresses भने, पशु शरीर एक विधवाको शिखर ढाकिएको छ, र तिनीहरूले हरेक दिन थप हुँदै गइरहेका छन्। Kish सुस्त हुन्छ, यो, अधिकांश समय तल झूट खान इन्कार गर्न सक्छ। प्रशस्त मात्रामा बुलबुले, को epithelium देखा पैसाबारे चाल को निशान छन्।
को परजीवी कसरी निकाल्न?
तपाईं आफ्नो बिल्ली टिकटिक भनेर पक्का गर्न चाहनुहुन्छ? गोठभित्र आफ्नो छाला सङ्कलन र बिस्तारै यो squeeze। आफ्नो संकीर्ण लम्बी शरीर र चार नंग्रा - यी manipulations पछि तपाईं निशान प्राप्त गर्न सक्छन्। कीरा लम्बाइ बारेमा 0.3 मिमी छ।
छैन पनि सबैभन्दा susceptible पाहुना, जसको पशु demodicosis भोगे, तपाईं भन्नेछु कसरी साह्रै बिरालोहरु मा उपचर्म कण देखिन्छ। फोटो संक्रमित पाल्तु जनावर देखाउन छैन राम्रो विशेष impressionable। यो ढिलो तपाईं उपचार सुरु, को सजिलो अन्ततः तपाईं र तपाईंको furry मित्र दुवै हुनेछ। अर्डर परजीवी एक पटक र सबै को लागि हटाउनेछ प्राप्त गर्न, तपाईंले आफ्नो बिरालो कटौती छ। विशेष यस सन्दर्भमा कठिन Persians मालिक, angora, balineziytsev र अन्य लामो-haired जातिहरु छन्। को सैलुन पछि, dermatitis विरुद्ध विशेष शैम्पू आफ्नो पाल्तु जनावर धुन र यसलाई पूर्ण ड्राई नभएसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि तेल संग प्रभावित क्षेत्र चिकनाना। लगभग पाँच घन्टा तपाईं बिरालो आफूलाई चाट्नेछन् छैन भनेर पक्का छ। छाला अचाक्ली घाइते छन् भने, उपचार दुई हप्ता सम्म पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ। समानान्तर मा, तपाईं बिरालो प्रतिरक्षा वृद्धि कि भिटामिन र लागूपदार्थ दिन सक्छन्।
नरम तन्तु चोटहरु। चोटपटक र hematomas देखि धन
Etiology, लक्षण, निदान र उपचार एन्टिबायोटिक संग निमोनिया को
MTZ 892: कैरेक्टराइजेशन, समीक्षा